विजय दमासे | गृहपृष्ठ
Home Archives by: विजय दमासे
विजय दमासे Articles 208
on: June 17, 2019 मुख्य खबर, समाचार
काठमाडौं । सातओटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ का लागि आयव्यय सहितको बजेट आइतवार सार्वजनिक गरेका छन् । असार १ गते अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशहरूले ब...	बिस्तृतमा
on: June 16, 2019 मुख्य खबर, समाचार
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ का लागि सातओटै प्रदेशले आइतवार बजेट ल्याउँदै छन् । प्रदेश सरकारहरूले आगामी आवको बजेट असार १ गते ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीय सरकारले प्...	बिस्तृतमा
परामर्श समितिको साटो राजस्व बोर्ड गठन हुँदै : २४ वर्षअघिको परिकल्पना पूरा गरिँदै
on: June 11, 2019 मुख्य खबर, समाचार
काठमाडौं । सरकारले वर्षेनि गठन हुने राजस्व परामर्श समितिको साटो शक्तिशाली राजस्व बोर्ड गठनको तयारी थालेको छ । नयाँ बजेटको तयारी शुरू भएपछि चैत/वैशाखतिर समिति गठन गर्ने र बजेटपछि निष्क्रिय बन...	बिस्तृतमा
चालू आवको बजेट ४०% खर्च हुन बाँकी
on: June 09, 2019 मुख्य खबर, समाचार
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ सकिन ३८ दिन बाँकी रहँदा कुल बजेटको ४० प्रतिशत खर्च हुन बाँकी देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यस वर्ष चालूतर्फ रू. ८ खर्ब ४५ अर्ब छु...	बिस्तृतमा
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : १ खर्बभन्दा बढी बजेट
on: June 06, 2019 समाचार
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सरकारले रू. १ खर्ब ३ अर्ब ८५ करोड खर्च गर्ने भएको छ । ती आयोजनामा चालू आव २०७५/७६ मा करीब रू. ९२ अर्ब विनियोजन भएको थिय...	बिस्तृतमा
प्राविधिक सहायतामा दातृ निकायको साढे ४४ अर्ब
on: June 05, 2019 मुख्य खबर, समाचार
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ मा सरकारका १८ ओटा निकायले दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रू. १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख बराबरको प्राविधिक सहायता १०१ ओटा आयोजनामा परिचालन गर्ने भएका छन् । य...	बिस्तृतमा
करको दायरामा व्यापक विस्तार : उपभोग्य वस्तुदेखि राँगा र बोका पैठारीसम्ममा कर
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को बजेट मार्फत करको दायरालाई व्यापक बनाएको छ । आर्थिक विधेयक, २०७६ मार्फत विभन्न कानून संशोधन गर्दै सरकारले आगामी आवका लागि राजस्व वृद्धि गर...	बिस्तृतमा
वैदेशिक सहायता परिचालन ‘संघीय मोडल’मा
on: June 02, 2019 मुख्य खबर, समाचार
काठमाडौं । मुलुक संघीयतामा गइसक्दा पनि लामो समयदेखि वैदेशिक सहायता केन्द्रीकृत नै रहेका बेला सरकारले त्यसलाई ‘संघीय मोडल’मा परिचालन गर्नेगरी नयाँ नीति निर्माण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार...	बिस्तृतमा
अर्थमन्त्रीले गरे बजेटको बचाउ
on: May 31, 2019 मुख्य खबर, समाचार
राजस्व संरचनालाई उत्पादनमा आधारित बनाइने साढे ८ प्रतिशत वृद्धिदर प्राप्त हुनेमा ढुक्क काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्पmत सांसदहरूलाई बाँडिएको रकमको...	बिस्तृतमा
२०७५/७६ को बजेट समीक्षा : लोकप्रिय कार्यक्रम फितलो कार्यान्वयन
on: May 29, 2019 मुख्य खबर, समाचार
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को बजेटमा सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने विगतकै जस्तो फितलो नै देखिएको छ । २०७५ जेठ १५ मा चालू आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर...	बिस्तृतमा